Uvimba woLondolozo lweBrand - 192.168.8.1
iindidi uhlobo Ushiye uluvo
Yila uthungelwano olungenazingcingo ngabomeleleyo Kuyabonakala AC okanye N umzila. Ngaba ukhetha uqhagamshelo kwi-Intanethi kwiPC yakho? Akukho miba. Ngendlela yee-Emous routers uya ku-surly uya kuba nekhonkco le-Intanethi elizinzileyo nelikhawulezayo.
Ii-routers eziphambili zine-firewall elula enceda ekukhuseleni ifomathi yenethiwekhi esekwe ekhaya ukufikelela okungafunekiyo kwi-intanethi. Njengoko olu thando lomlilo luthintela unxibelelwano lwangaphakathi unokufuna ukuvula izibuko ngalo izicelo ezithile kunye nemidlalo. Le ndlela yokuvula izibuko ihlala yaziwa njengezibuko ngaphambili kuba uthumela izibuko kwi-intanethi yenethiwekhi esekwe ekhaya.
Nge-Eminent Wireless 300N Router unokwabelana ngenethiwekhi yakho ngesantya esiphezulu kakhulu malunga ne-300Mbps. Le router ye-Wireless N eyomeleleyo ecaleni kweeiriyali ezimbini iphakamisa kakhulu uluhlu lwakho olungenazingcingo. Ncamathisela abasebenzisi abaninzi, i-wired okanye i-wireless. Yiba nesibonelelo sesantya esiphezulu, kunye nendlela engenamsebenzi yokuxela uqhagamshelo lwakho. Ngenxa yesantya esiphezulu, i-Wireless Router ilungele ukudlala imidlalo ekwi-Intanethi kunye nokusasaza umculo kunye nevidiyo.
Ukuphucula abaxhasi benethiwekhi, kulungile ukuqonda ukuba i-Eminent Wireless Router inezinto ezininzi ezinzima. Faka isicelo se-WDS kunye ne-Wireless Bridge isebenza ukwandisa imiqondiso yakho ngaphandle kwamacingo. Ngenxa yeprosesa yesantya esiphezulu kunye 'nokuTshekishwa kwetrafikhi' nganye ye-IP, izibuko okanye iProtocol, unokuqinisekisa ukuba uhlala udlala okanye ukhangela i-intanethi ngokukhawuleza.
Ii-SSID ezongezelelekileyo zinokongezwa ngokungazami kwaye zidityaniswe zodwa ukuba kubalulekile. Oku kukuvumela ukuba usete ngokukhawuleza kwaye ngokulula usete iinethiwekhi ezizezesibini kubasebenzisi beendwendwe. Oku kufanelekile kwiindawo zeshishini ezinje ngehotele okanye indawo eneshushu, umzekelo, apho ufuna ukwahlula iindwendwe kwinethiwekhi yakho yeshishini.
I-Eminent 300N Wireless Router inokusetyenziswa kunye nezixhobo ezingama-54 Mbps kunye ne-11 Mbps. Uluhlu olupheleleyo kunye nesantya esijikeleze i-300 Mbps, kuyacetyiswa ukuba usebenzise izihlanganisi ezingenantambo ze-Intanethi.
Inkqubo ephambili yokuvula izibuko yile:
Cwangcisa idilesi ye-IP emiselweyo kuyo nayiphi na iPC yakho okanye isixhobo ekufuneka usithumele kwizibuko.
Ukungena kwi-router ehamba phambili.
Yiya kwicandelo lokudlulisa izibuko.
Ukuchofoza ukuCwangcisa ukutshintsha isixhobo.
Ukucofa kwikhonkco lokuseta kwangaphambili.
Ukuchofoza kwi-NAT / Ukuhambisa.
Ukuchofoza ukuqhubela phambili kwePort.
Yenza ungeniso lokudlulisa izibuko.
Nangona amanyathelo anokubonakala ekhohlisayo ekuqaleni, vele uhambe ngezantsi kwamanyathelo erutha yakho ebalaseleyo.
Kubalulekile ukuseta idilesi ye-IP emiselweyo kwisixhobo osithumela kwizibuko. Oku kuqinisekisa ukuba amazibuko aya kuhlala evulekile nasemva kokuba isixhobo siqala ngokutsha. Xa useta idilesi ye-IP emiselweyo kwizixhobo ofuna ukungena kuzo kwi-router.
Ngoku kuya kufuneka ungene kwi-Eminent router. I-router ine-interface yewebhu, ke ngoko unokungena kuyo kunye nesikhangeli sewebhu. Oku kunokuba yiyo nayiphi na iGoogle Chrome, Edge, Opera, okanye Internet Explorer. Ngokwesiqhelo ayinamsebenzi ukuba ukhetha ukusebenzisa esiphi isikhangeli. Idilesi ye-IP ye-router yakho inokude ibhekiswe kuyo njengesango lokungagqibeki lePC.